စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးရာဌာန ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတို့အကြား အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် | Commerce Journal
Home » -Cover_Story » စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးရာဌာန ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတို့အကြား အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် » အထွေထွေ
Fri, 07/17/2020 - 14:27 -- journal_editor
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးရာ ဌာန ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရတို့အကြား အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင် ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ကျင်းပသည်။
ဆွေးနွေးပွဲပထမပိုင်းအစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ဖတ်ကြားရာ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံ ရေးကို အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သည့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ကာလ တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင် တာများ သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် e-Governmentလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက် လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့ သို့ ကပ်ရောဂါကာလစိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲများ ကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် အသုံးချလျက် အစိုးရဌာန များ၏ ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်မှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ အလားတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် e-commerce စနစ်ကို အချိန်မီလက်လှမ်းမီ အသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင် ရေးကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ လူနေမှုဘဝများ ပုံမှန်လည်ပတ် နိုင်ရေးဟူသည့် ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင် သည့် New Normal အနေအထားတွင် အီလက်ထရော နစ်နည်းပညာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းတို့သည် အချိန်ကိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ထွက်ပေါက်တစ် ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား နှစ် နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို E-commerce စနစ်ကို တိုးမြှင့် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများ အရှိန်မပျက် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ် သလို ကုန်ကျစရိတ်များကို ချွေတာလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ငွေကြေးကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း၊ ဈေး ကွက်ပိုမိုရရှိလာနိုင်ခြင်း၊ အချိန်နှင့် လူအင်အားအသုံး ပြုရမှုများ လျော့နည်းစေခြင်း စသည့် အကျိုးတရား များ ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြား ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကိုဗစ် -၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ကို တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား e-commerce စနစ် ဖြင့် ပေါင်စည်းမြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ ကပ် ရောဂါ၏စိန်ခေါ်မှုကို အတူတကွ ကျော်လွှားပြီး နှစ် နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော် ဆောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်တို့က လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံတကာရေးရာဌာန (IDCPC) မှ ဝန်ကြီးMr. Song Tao? တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟို ကော်မတီမှ ဒုတိယ ဝန်ကြီး Mr. Guo Yezhou၊ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Chen Hai တို့ကလည်းကောင်း အမှာစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အခြေအနေအောက် စွမ်းဆောင်မှု အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးရန်၊ ဒေသနှစ်ရပ် လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစေရန်၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် ဒေသနှစ်ခုအကြား BRI နှင့် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံ မူဘောင်အောက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံလူမှုစီးပွား လျင်မြန်စွာနာလန်ထူရန်၊ အထူးသဖြင့် ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့အကြား Digital economy ? E-commerce ? ၊ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး စသောနယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူနန် ပြည်နယ်အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်၊ ဆင်းရဲမှုပပျောက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူများ၊ Alibaba ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဆက် လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး ညနေ ၄ နာရီတွင် ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။